30W « MMWeather Information BLOG
ပင်လယ်(၄)ခုဖြတ်သန်းခဲ့သည် 30W – မှတ်တမ်း
By mmweather.ygn, on November 18th, 2013%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် စတင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့၊ ကပ္ပလီပင်လယ်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့အား ဖြတ်သန်းကာ အာရေဗျပင်လယ်ထိရောက်ရှိလာသော 30W သည် အာရေဗျပင်လယ်အတွင်း အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ (ပုံ)
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မည်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုမှ ရှိတော့မည် မဟုတ်သော်လည်း မုန်တိုင်းတစ်လုံး၏ ရှည်လျားလှသော ခရီးအား ဗဟုသုတအဖြစ် မှတ်တမ်းထားနိုင်ရန် ဤ post အား ရေးသားသိမ်းဆည်းထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ 30W ၏ ယခင် ရေးသားခဲ့သည့် post – http://blog.mmweather.com/2013/11/08/regeneration-lpc-andaman-sea-bay-of-bengal/
30W စတင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အထိ ရွေ့လျားမှု မှတ်တမ်းပုံ (WUND) . . . → Read More: ပင်လယ်(၄)ခုဖြတ်သန်းခဲ့သည် 30W – မှတ်တမ်း
Leaveacomment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့မှ မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည့် SYSTEM များ – followup
By mmweather.ygn, on November 13th, 2013%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W(တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်မှ တစ်ဆင့် ရွေ့လျားလာခဲ့သော SYSTEM ဖြစ်ပါသည်) သည် နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် ချင်နိုင်းမြို့ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၄၃ဝ ခန့်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၅၆ဝ ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ် အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၅ဝဝ ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက် ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပါသည်။ GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်အရ 30W သည် ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းကျော်လွန်လျှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည်ရ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။(ပုံ-၁)
လေဖိအားနည်ရပ်ဝန်းသည် အင်အားပိုမိုကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရပြီး မြောက်ဘက်သို့ . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့မှ မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည့် SYSTEM များ – followup
2 comments Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မုန်တိုင်း ကပ္ပလီပင်ပြင်အထိ ရောက်လာနိုင်ဘွယ်ရှိ
By mmweather.ygn, on November 12th, 2013%
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HAIYAN ၏ ပြင်းထန်သော ထိုးနှုက်တိုက်ခတ်မှုအား ခံစားခဲ့ရသည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ TACLOBAN မြို့ပေါ်မှဖြတ်၍ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဆင်းသက်ရောက်ရှိလာသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 90W သည် အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီမှ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ အဆင့် HIGH တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေပါသည်။
90W သည် ယနေ့(၁၃-၁၁-၂ဝ၁၃) ညပိုင်းမှ စတင်၍ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်း Sparatly ကျွန်းစုများအနီးတွင် မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီး အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ ပိုမိုးအားကောင်းလာ၍ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကမ်းခြေသို့ ဦးတည်တိုက်ခတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်းချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်စဉ် . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မုန်တိုင်း ကပ္ပလီပင်ပြင်အထိ ရောက်လာနိုင်ဘွယ်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized ကပ္ပလီပင်လယ်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W update
နေ့လည် ၁၂း၃ဝ နာရီ – တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ တစ်ဆင့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ်၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၇ဝ မိုင်ခန့်၊ ဖျာပုံမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ၂၂၆ မိုင်ခန့်၊ ထားဝယ်မြို့ အနောက်ဘက် ၂၈ဝ မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 25 knots(28.76 mph) ရှိကာ ဖိအား 1004 hPa တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေကြောင်း နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ သိရပါသည်။(ပုံ)
30W သည် အနောက်ဘက်(Heading 275 degrees) သို့ တစ်နာရီ ၁၁ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး မူလ ခန့်မှန်းချက်အတိုင်း အန်ဒါမန်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းအား ယနေ့ . . . → Read More: ကပ္ပလီပင်လယ်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W update
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်လာမည်
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် တောင်ပိုင်းမှ စတင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှတစ်ဆင့်ဗီယက်နန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းအား ဖြတ်သန်းလာခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W(THIRTY)သည် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အား ဖြတ်သန်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်မြို့အနီးမှ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ယနေ့ညပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်လာမည်ဟု နောက်ဆုံးရရှိသည့် NRL data များနှင့် Steering layers လေစီးကြောင်းများအခြေအနေအရ ခန့်မှန်းရပါသည်။(ပုံ-၁)
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W သည် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ အန်ဒါမန်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းအား ဖြတ်ကျော်ပြီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ မြောက်လေစီးကြောင်းများ၏ အားကောင်းသော အခြေအနေကြောင့် 30W သည် အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေသာရှိပြီး၊ JTWC မှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် . . . → Read More: လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်လာမည်
Leaveacomment Uncategorized ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ မုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့်ရောက်ရှိလာနိုင်မည့် 30W
တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 30W(THIRTY)သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မုန်တိုင်းအမည် မရရှိသေးသော်လည်း မူလ ခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းစီးတီး အရှေ့ဘက် မိုင် ၆၇ဝ ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ 30W သည် ယနေ့ညပိုင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည်ရ မုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း TSR ခန့်မှန်းချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
JTWC မှ warning-09 အရ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီတွင် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ကမ်းခြေမှ မိုင် ၈ဝ ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 70- knots(80.5 mph)သို့ ရောက်ရှိကာ ၄င်းနေ့ ညပိုင်းတွင် . . . → Read More: ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ မုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့်ရောက်ရှိလာနိုင်မည့် 30W